ناحوم 1 NAV - Nahum 1 ASCB
1Elkosini Nahum anisoadehunu nwoma a ɛyɛ nkɔmhyɛ a ɛfa Ninewe ho.
Awurade Abufuo A Ɛtia Ninewe
2Awurade yɛ ninkunfoɔ ne aweretɔ Onyankopɔn,
Awurade tɔ wedeɛ na abufuo ahyɛ no ma.
Awurade tɔ nʼatamfoɔ so wedeɛ
na nʼabufuo tena wɔn so.
3Awurade bo kyɛre fu, na ne tumi so,
na ɔtwe ɔfɔdifoɔ aso.
Ne kwan wɔ ntwahoframa ne ahum mu,
omununkum yɛ ne nan ase mfuturo.
4Ɔteatea ɛpo na ɔma ɛwe;
ɔma nsubɔntene nyinaa wewe.
Basan ne Karmel twintwam
na Lebanon frɔmfrɔmyɛ nso kusa.
5Mmepɔ woso biribiri nʼanim
na nkokoɔ nane.
Asase, ewiase ne wɔn a wɔwɔ mu nyinaa
6Hwan na ɔbɛtumi agyina nʼabufuo ano?
Hwan na ɔbɛtumi atena nʼabufuhyeɛ mu?
Nʼabufuo hwie te sɛ ogya;
ɔyɛ ahohia mu dwanekɔbea.
8Nanso, ɔnam nsuyire nwanwasoɔ so
bɛma Ninewe aba awieeɛ.
Ɔbɛtaa nʼatamfoɔ akɔduru esum kabii mu.
9Ɛpɔ biara a wɔbɛbɔ atia Awurade no,
ɔhaw biara remma ne mprenu so.
10Wɔde nkasɛɛ bɛkyekyere wɔn ho,
na ɛberɛ a wɔn nsa aboro wɔn no
wɔbɛhye wɔn sɛ wira dwaneeɛ a wɔaboa ano.
11Ao, Ninewe, wo mu na
deɛ ɔbɔ ɛpɔ bɔne tia Awurade
na ɔtu fo bɔne no firie.
12Deɛ Awurade seɛ nie:
“Ɛwom sɛ wɔwɔ apamfoɔ a wɔdɔɔso deɛ,
Ao Yuda, ɛwom sɛ mama ɔhaw aba wo so,
13Afei, mɛbubu kɔnnua a ɛda wo kɔn mu
na matete nkɔnsɔnkɔnsɔn no mu.”
“Worennya asefoɔ a wo din bɛda wɔn so.
Mɛsɛe nsɛsodeɛ a wɔasene ne ahoni a wɔaguo
a ɛsisi wʼabosonnan mu no.
ɛfiri sɛ wadane ayɛ atantanneɛ.”
15Hwɛ mmepɔ no so,
deɛ a ɔde asɛmpa no ba no anammɔn
Ao, Yuda di wʼafahyɛ na
Nnipa bɔne rentu wo so sa bio;
ASCB : Nahum 1